आईफिल टावरमा पनि धरहराको जस्तै हावा चल्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फ्रान्सको आईफिल टावरमा पनि धरहराको जस्तै हावा चल्ने बताएका छन्। धरहराको उचाइमा चढ्दा हावा चलेको बताउँदै उनले भने, "माथिको हावालाई केहिले पनि छेकेको छैन। सर्वसाधारणले त्यसलाई अनुभूति गर्न पाउँछन्।" यही सन्दर्भमा ओलीले आईफिल टावरमा पनि धरहराको जस्तै उद्धुम हावा चल्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार, यस्तो बन्यो ओली नेतृत्वको क्याबिनेट
काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार गरेका छन् । तीन जना उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको ओलीको क्याबिनेटमाराज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्न पुगेको
Artha Dabali 11 दिन पहिले
सरकारको 'पपुलिष्ट' बजेटमा नयाँ केके आयो ?
काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि प्रस्तुत बजेटमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन
Artha Dabali 23 दिन पहिले
बजेट अध्यादेशबाट आउँदैन, नियमित प्रकृयाबाटै ल्याइन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेट अध्यादेशबाट नआउने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ को बजेट ल्याउने ढिलाइ भइरहेको समयमा सरकारले अध्यादेशबाट
Artha Dabali 1 महिना पहिले
साँझ ६ बजे ओली र नेपालबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आज भेटवार्ता हुने भएको छ । आज साँझ ६ बजे सिंहदरबारमा ओली र नेपालबिच भेटवार्ता हुने तय गरिएकाे हो । वार्तामा ओली र नेपालले आफू निकट नेताहरुलाई पनि सामेल गराउने भएका छन् । आजको भेटमा ओली पक्षबाट अध्यक्ष ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका […]
प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोरिए सबै मन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि आफ्नो क्याबिनेटमा रहेका सबै मन्त्रीहरुलाई दोहोर्‍याएका हुन् ।
तटस्थ रहेन जसपा, बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले विपक्षमा मत दिने
२६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन संसदमा आउँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरुले स्वविवेकले मतदान गर्न प्रयोग पाउने भएका छन् । पार्टी शीर्ष नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाउने निर्णय गरेको हो । संघीय परिषदका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको निवास, टोखामा बसेको बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ […]
ओलीलाई हराउने उपयुक्त समय आएको छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य
२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिइरहेको बेला राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेताहरुमात्रै होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई एमालेको माधव–झलनाथ समूहलाई समेटेर एमालेलाई एकढिक्का बनाउने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । यो सक्रियताले के […]
फलाममा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल- प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फलाम र स्टिलको कच्चा पदार्थको लागि बाहिर जानु नपर्ने बताएका छन्। "सरकारले यतिबेला नेपालमै फलाम खानीको अन्वेषण गर्दै छ। उक्त अन्वेषण सफलताको नजिक पुगेको र उत्पादन सुरु भएपछि कच्चा पदार्थ ल्याउन विदेश जानु पर्दैन," प्रधानमन्त्री ओलीले आज पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। सरकारले पूर्वी नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानीको अन्वेषण गरिरहेको छ।
धरहरा चढ्दा आइफल टावर चढेको झल्को आयो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा चढ्दा आफूलाई आइफल टावर चढेको झल्को आएको बताएका छन्। शनिबार नवनिर्मित धरहरा उद्घाटनका क्रममा २० औं तल्ला पुगेर राजधानी अवलोकनको क्रममा उक्त झल्को आएको ओलीले बताएका हुन्।
सेतोपाटी 1 महिना पहिले
धरहरा चढ्दा आइफल टावर चढेको झल्को आयो : प्रधानमन्त्री ओली, 'माथि वेगका साथ हावा चलेको छ'
पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा चुनाव : प्रधानमन्त्री
१५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमा प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च […]
अनलाइनखबर पौष २०७७